Samatabbixinta xaday on Västbyn! | Holmbygden.se
“doon waxa kaliya ee loo isticmaali karo xaaladaha degdegga ah”, ayaa sheegay in calaamada ee dabaasha West Village. Hadda waxay u muuqataa doon gurmadka, si kastaba ha ahaatee, ayaa la xaday.
Inta badan, doon samatabbixinta on Västbyn ka xaday September this. Shaac la helay Fadlan haddii more wax arkay. Sida laga soo xigtay kooxda martida qubayska soo noqnoqda samatabbixin doonaa doon halkaas xagaaga. Haddaba, si kastaba ha ahaatee, waxaa la ogaaday in ay ka maqan, iyo in la ciiraya agagaarka dubo ah.
Hadal markhaati oo ku saabsan xaday suurto gal
Waxaa laga yaabaa in sidoo kale in ku daray 6 September hareeraha 17 subaxnimo ka doon arkay van a on qubeyska ah. Marka aad markaas u leexatay xagga xeebta doon, saas yeeleen van ay si lama filaan ah si dhaqso ah iyo iska raacay albaabbada u furan. Ka dib markii in ay jiraan ugu yaraan doon no. Haddii ay markaas waxaa jiray ka hor inta aan la odhan karaa iyadoo la hubo, laakiin ay u badan tahay waxaa laga yaabaa in la xiriira.
Ma jiraa qof kale oo isaga ku odhan kara markay arkeen ugu dambeeyay ee dhaw ama aragtay waxa ay noqon kartaa van, s sidaas awgeed, fadlan!
Maxaad sameyneysaa haddii aad aragto wax u eg?
Raadinta ee xadgudubyada ah raacsan socda waa in dabcan wac booliiska via 112. Iyadoo aqoonta in booliska inta badan 5 mil iska, mid ama xaaladaha su'aal sidan oo kale markii ahayn karaa “kaliya” arko wax laga shakiyo, waxa ay sidoo kale noqon kartaa smart in ay si toos ah u wadaagaan Holm Group on Facebook. Waxa suurto gal ah la image ah oo la xiriira. Sayidka gaadhay si toos ah in ka badan 300 Xubnaha indhaha gudaha iyo hareeraha Holm la. sidoo kale waxaad ku biiri haddii aad horay u haysan, si aad u ogaato waxa ka dhacaya baadiyaha.
Resources Samatabbixinta leeyihiin, laakiin muhiim ah in meelaha miyiga ah
doon Samatabbixinta ee Västbyn waa kayd muhiim ah oo haleeshay gudaha dhacdaa xeebta ama waxaa baddii ku. Like qalab kasta oo badbaadada kale meelaha ay dadku ku nool gaar ahaan muhiim ah marka ay caadi ahaan qaadataa waqti dheer adeegyada degdegga ah iyo ambalaaska si ay u yimaadaan. In Holm ayaa sidoo kale u badbaadin karaa isticmaalka doon ah waxa loogu yeero deriska Hagaajiyey ee ku jira meelaha filiqsanaa. At alarm a qaraqmeen in Holmsjön digniinta SOS Alarm si toos ah caawiyaa agagaarka Holm ku via SMS iyo fursad u leeyihiin inay badbaadiyaan qof cidhiidhi ku hor yimaado shaqaalaha badbaadada dadweynaha. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan deriskiisa Mashruuca Xoojinta ah in Holm halkan iyo sida ay u shaqayso. Halkan waxa kale oo aad ku muujin karto xiisaha haddii aad rabto in aad ku lug sida khayraadka iskaa wax u qabso ah.